Xasuuqii argagixisada iyo kaalinta culimada - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Xasuuqii argagixisada iyo kaalinta culimada
Qormadan kooban uguma taligelin in aan ku duro culimada laakiin waa mid aan ugu talogalay inaan ku xasuusiyo kaalintooda muhiimka ah ee uga aadan ka wacyigelinta dhalinta khatarta ay leedahay in laga mid noqdo dhiigmiiratada ku xasuuqaya Muslimummada ummada magaca diinteena ka berida ah.
Ma arko culimada oo maalmaha muhiimka ah sida Jimceyaasha, ciidaha, soonka, isku imaatinka casuumadaha ay helaan, uga faaiideysta inay u gooyaan ka hadalka cadowga koowaad ee diinteenii iyo dhaqankeenii weerarka ku ah tusaana dhalinta.
Culimada aad ku arkeysaan sawirka maaha in iyaga ku socota laakiin waa dhamaan culimada hor fadhida shaashadaha aaladaha reer galbeedka ee ay ku adagtahay inay taabtaan waxa taagan.
Waxaan si gaara mawduucan u xusayaa kulankii ka dhacay dalkaasi Yugandha oo culimada waaweynaa intii ay ka hadli lahaayeen xasuuqii Muqdisho si mid mida ay ka jeclaysteen inay hal qoraala soo saaraan.
Hadda waxay noqonaysaa in laweydioyo waxa ay Ku doorteen inayna ka hadal laakiin bustaha ka hoos galeen taas oo direyska fariin.
Waxaan ogyahay in culimadu midwalba ku kalsoon yihiin urur diimeedyada Carabta ee ay ku jiraan. Taas oo keenaysa inay ku ekaadaan taageerada urur diimeedyada oo keliya.